Blog - Inotevera Supply Chain
Kudonhedza ndeimwe yemhando dzakakurumbira dzemabhizinesi mazuva ano. Yakazvisimbisa pachayo seyakajeka basa ine yakaderera mari uye inoshanduka. Nekudaro, kumisikidza chitoro chepamhepo uye kuratidza zvigadzirwa zvako hazvina kukwana; kukwidziridzwa uye kugutsikana kwevatengi kunoita basa rakakosha kuita chero bhizinesi kuti ribudirire.
Mumwe weakadai mupi webhizinesi, uyo anoita senzvimbo inoshanda yekumisikidza yako yemahara kudonhedza bhizinesi pasirese ndiyo Nextschain. Ngatitarisei muzvikonzero zvinoita kuti Nextschain piyona muindasitiri yayo.
Kusarudzwa kwakawanda: Nextschain ine zvikamu zvakasiyana zvevatengesi vachishandisa iyo Shopify APP, ichivagonesa kusarudza kubva kuzviuru zvezvigadzirwa zvinokunda kubva kukatalog yavo uye vozviwedzera muchitoro chavo. Zvisinei, zvakakosha kusarudza imwe niche; kana mutengesi ari wekutanga, sezvo zvichibatsira kuwana chivimbo uye kuongorora zvinodiwa pamusika. Kupfuurirazve, iyo inoderedza iyo njodzi njodzi zvakare.
Kutengesa uye Kushambadzira: Nextschain inobvumira vashandisi kutarisisa pane yekutengesa uye yekushambadzira chikamu, sevaya nyanzvi kugadzirisa manejimendi uye nzira yekutumira. Mutengo wavo wekutengesa wakanyanya kunaka mumusika, unovatendera kuti vawane purofiti yepamusoro uye kusimudzira mari yavo.
Zvirongwa zvakasiyana: Semutangi, munhu wese anoda kuvhura bhizinesi ravo nemari yakaderera. Nextschain ine yekutanga-up chirongwa iyo inogara zvachose mahara. Zvisinei, kana vashandisi vawana ruzivo; zvinokurudzirwa kukwidziridza kune chirongwa chiri nani cheakanakisa chiitiko.
Kutumira sarudzo: Nextschain ndomumwe wevashoma vanodonhedza vatengesi avo vanotumira maoda muhuwandu pasi rese nemitengo inodhura. Hunhu hwavo hwekuchengetera zvinhu hunogadziridza otomatiki uye vanotumira iwo maodha pachine panguva yepamusoro mwaka senge Nerusi Chishanu kana Kisimusi yekutakura panguva yakakodzera.
Zvemagariro enhau Kufurira: Zvemagariro midhiya ndiyo imwe yenzira dzinomanikidza uye ine mukana wekuwana zvimwe kutengesa uye kuwedzera purofiti. Nextschain inobatsira Shopify vatengesi veapp neakagadziriswa, chaiwo Facebook kushambadzira pane zvese zvakanyorwa zvigadzirwa. Uyezve, zvinovagonesa kusimudzira nekutarisira bhizinesi ravo.
Kuvaka zita rezita: Nekuda kwemakwikwi akawandisa, kuvaka zita rechiratidzo kwakabuda sedanho rinokosha remabhizinesi. NeNextschain, vashandisi vanogona kupurinda iyo logo yesarudzo yavo pabhokisi repakeji kuti vabude mumakwikwi. Nekuda kweizvozvo, vatengesi vanogona kuvaka kuvimba mukufamba kwenguva nevatengi vavo uye kunakidzwa nekuvimbika kwevatengi kukuru.
Mamwe masevhisi: Vazhinji vanopa masevhisi vanobhadharisa kudhinda ruzivo rekambani yemushandisi pane invoice. Nextschain inogonesa invoice yakagadzirirwa yemahara pane ese maodha. Kunze kweizvi, kana paine chero ehunhu hunhu nechigadzirwa mukati memazuva manomwe, vashandisi vanokodzera kupihwa mari yakakwana.
Nekuda kwezvinhu zviri pamusoro, Nextschain yakabuda seimwe yemhando dzinovimbwa kwazvo mumusika wepasirese. Kuchengetwa kwavo kwevatengi kunopa yakanakisa post-kutengesa sevhisi. Zvekuvaka kuwanikwa pamhepo, ndeimwe yenzira dzinokurumidza kutanga nemari yakaderera. Nemabasa epamusoro ekudonhedza Nextschain, vashandisi vanogona kutarisisa mhando pamwe nehunhu uye kusimudzira bhizinesi ravo.